Nọmba oyi site na Top 40 Geospatial na Twitter - Geofumadas
Nọmba oyi site na Top 40 Geospatial na Twitter
June, 2015 Geospatial - GIS, Internet na Blogs
N'otu oge anyị ekwenyeghị na ọrụ nke akaụntụ Twitter nwere ike ịdị ezigbo mkpa. Ma n'ime ụwa ebe anyị na-eri mmiri n'oké osimiri, afọ atọ nke Tweet na-adọrọ adọrọ ma ọ bụrụ na a na-ewepụta akụkọ ndị na-anọchi anya ihe ọmụma, karịa ozi, na-ahọrọ mgbe niile.
Nke a, tinyere ọzụzụ nke 2 na mbipụta akwụkwọ akụkọ 5 kwa ụbọchị na ntinye ahọpụtara na-emepụta uru agbakwunyere karịa uto na ntanetị ma ntanetị na ntanetị na ọkacha mmasị.
Twitter dị ka ịgụ isi akụkọ nke akwụkwọ akụkọ e bipụtara. Bara uru maka ndị na-ekpebi ihe, na-akụda mmụọ ma ọ bụrụ na ọdịnaya gị adịghị mma. N'echi ha adịtụghị mma maka ikechi azụ.
Nlekota ndi Top 40 nke akaụntụ Twitter Na mpaghara geospatial, ndị a bụ ụfọdụ ọnụọgụ oyi, ruo 29 nke June nke 2015:
Mmegharị dị mkpa
Ka akaụntụ wee nọgide na-asọmpi, ọ ga-enwerịrị ọkara afọ agụmakwụkwọ karịa 10%. Ihe na-erughị nke ahụ pụtara itufu oche na nkezi nke na-eto n'etiti 11% na 15%.
Tebụl na-egosi na kọlụm nke anọ otu uto si dị n’ime ọnwa isii a. Na uhie, ihe ndekọ na uto n'okpuru 10%, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ndị na-eto karịa 25%.
Mpaghara 1 - Oke nke 1 - 50% nke okporo ụzọ agbadoro na akaụntụ 6.
Mpaghara a agbanweela nke ukwuu. Ihe iche a dị na @gisday nke toro 32%, na-ebugharị @gersonbeltran nke na-eto eto 7%.
Mpaghara 2 - ntụgharị - 15% nwere akaụntụ atọ.
Ha na-akwali ịga n'ihu na-arịgo na mpaghara siri ike. Ọ bụrụ na omume ugbu a na-aga n'ihu, @MundoGEO nwere ike ịda na mpaghara a n'ihi obere ọrụ.
Mpaghara 3 - kwụ n'ahịrị.
Akaụntụ ndị ọzọ mejupụtara 35% nke okporo ụzọ kewapụrụ na ngalaba 4:
Nke a na - anọchi anya 8% nke okporo ụzọ, yana uto n'ime oke.
Ihe ndekọ 6 na-anọchite anya 10% a, ya na uto na-akpali mmasị nke @masquesig (32%) na mappinggis (28%)
Ihe ndekọ 7 na-anọchite anya 9%. Site na ngwa ngwa @egeomate, @NewOnGIScafe na MappingInteract
Lee ebe a ka ị ga-ahụ ma na - eme ngwangwa na @COMUNIDAD_SIG
Mba Akaụntụ jun-15 Uto nke ọnwa 6 Chịkọbara Pasent Onu ogugu Mpaghara
10 Esri_Spain 5,881 10% 67% 3% Agba Q1 8%
13 @mappinggis 4,817 28% 74% 2% Agba Q2 10%
19 @Cadalyst_Mag 2,965 8% 84% 1% Agba Q3 9%
23 @bebemapa 2,626 2% 89% 1%
26 @POBMag 2,347 16% 92% 1% Agba Q4 9%
Amụma amụma maka December 2015
@mappinggis ga-agbago Tail Q1, na-achụpụ @URISA nke ga-adaba na Tail Q2, ka onye @geomate meriri ya.
@MundoGEO ga-adaba na mpaghara ntụgharị, @gisday ga - alụ ọgụ ọpụpụ nke Top1 na MundoGEO, ruo na nsọtụ ndị na - eso 15,500.
@COMUNIDAD_SIG ga-ebugo ụfọdụ oche 5 mgbe niile na Tail Q4, ya na ụfọdụ ndị na-eso 1,129.
@orbemapa ga-ada na Tail Q4. -Echeghị m ọzọ, na mgbanwe ọ na-eme na mbụ, ọ ga-akarị ndị na-eso ụzọ 3,200, karịa @Tel_y_SIG na Cadalyst_Mag. Mgbe niile na ọdụ Q3.
Soro Top40 na Twitter
Previous Post«Previous Bentley Connection Omume
Next Post Usoro 9 GIS gbadoro anya na njikwa ihe okikeNext »
5 Na-aza "Ọnụọgụ Nzuzo sitere na Top 40 Geospatial na Twitter"
September, 2015 na
Anyị ga-esochi akaụntụ ahụ, anyị ga-atụle ya maka mbipụta ọzọ.
Luis Quesada kwuru, sị:
Ọ ga-amasị m ịtụ aro ka ị lelee akaụntụ Twitter anyị (https://twitter.com/GeoInnovaASL - Ndi n’eso uzo 2.649)http://geoinnova.org/blog-territorio) ịtụle itinye ndepụta gị.
Dị ka nkwa siri ike m nwere ike ịgwa gị na site na blọọgụ anyị anyị na-enye ozi na ọzụzụ nke GIS na gburugburu, na-ejikwa, dịka ọmụmaatụ, otu Facebook «Tutorials, ngwá ọrụ GIS na ọmụmụ» na ndị otu 18K (https://www.facebook.com/groups/MundoGIS).
Daalụ maka mbọ gị na mbọ gị na ndị GIS gbara.
Ezi nyocha! na ọ dị mkpa ịmata steeti geomatic nke Netwọlụ.
N'okwu m, enwere m olileanya na amụma ndị a anaghị emezu (:
Aurelio Morales kwuru, sị:
Nnyocha dị mma!
Atụrụ m anya na amụma ndị mezuru 😉
M na-eme njem kwuru, sị:
Kedu ihe ndepụta ga-adị ka igosi nanị akaụntụ nke na-ebipụta na mbụ n'asụsụ Spanish?